गृहमन्त्री बादलको यस्तो आदेशलगत्तै गिरफ्तार परिन् उमा भुजेल, प्रहरीले समातेर कहाँ पुर्यायो ? — Sanchar Kendra
गृहमन्त्री बादलको यस्तो आदेशलगत्तै गिरफ्तार परिन् उमा भुजेल, प्रहरीले समातेर कहाँ पुर्यायो ?
काठमाडौं । २ दिनअघि मात्रै गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ‘बादल’ ले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि थप दमन र धरपकड बढाउन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई बोलाएर निर्देशन दिए । बादलको सोहि निर्देशनअनुसार नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुलाई खोज्दै हिडेको प्रहरीले शनिबार पूर्वबाट नेकपकी प्रभावशाली नेतृ उमा भुजेललाई गिरफ्तार गरेको छ ।
गिरफ्तार हुनेमा नेकपा मेची-कोसी इन्चार्ज उमा भूजेल, मोरङ इन्चार्ज नरेश चौलागाइँ, मेची-कोसी ब्यूरो कार्यालय सचिव सुमन सिंह र क्षितिज पौडेल छन्। सिंह र भूजेललाई शनिबार बिहान प्रहरीले सुनसरीको चक्रघट्टिबाट पक्राउ गरेको हो भने चौंलागाई र पौडेललाई शुक्रबार सोमबारे हाटबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
त्यस्तै सोहि ठाउँबाट अन्य ५ जना पनि गिरफ्तार परेका छन् । अहिले उनीहरु सबैलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको हिरासतमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। भुजेल १० वर्षे माओवादी जनयुद्धका बेला गोरखा जेल ब्रेक गरेर चर्चामा आएकी नेतृ हुन् । भुजेलसहितकाे टाेलीले २०५७ साल चैत १७ गते गोरखा जेल ब्रेक गरेकाे थियाे।
प्रहरीले २०७५ फागुन १० पछि हालसम्म नेकपाका एकहजार दुईसय ५८ जनालाई गिरफ्तार गरेको दावी गरेको छ । जसमध्ये उच्च तहका नेता नै २ सय बढी रहेको प्रहरी दावी छ। पक्राउ पर्ने उच्च नेतामा स्थायी समिति सदस्य र मध्यकमान्ड इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश ओली (सुदर्शन), मध्यपश्चिम कमान्ड इन्चार्ज चन्द्र बहादुर चन्द (वीरजंग), पोलिट्ब्युरो सदस्य भरतबहादुर बम छन्। यस्तै, अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीकी केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्धु चन्द (शिला) पनि पनि रहेकी छिन। गिरफ्तार पर्ने जिल्ला तहका नेता भने ६ सय ६४ जना रहेको प्रहरीले जनाएको छ।